चन्द्रदर्शन शाकोसको सातौ बार्षिकोत्सव सम्पन्न::Hamrodamak.com
चन्द्रदर्शन शाकोसको सातौ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
कमल,७ असार / कमल गाउँँपालिका–५ पाडाजुंगीमा रहेको चन्द्र दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बुधबार आफनो सातौ बार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाएको छ । संस्थाको प्राङगणमा एक कार्यक्रम गरि संस्थाले खुल्ला रक्तदान, दन्त शिविर तथा महिलाका रोग सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेतको आयोजना गरिएको थियो । त्यस्तै, संस्थाले दमकको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रलाई १० थान प्लाष्टिकको फोल्ङि कुर्सी समेत हस्तान्तरण गरेको छ ।
बार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उपशाखा लखनपुरका सभापति चन्द्र शाहले गरेका थिए । उनले केक काटेर बार्षिकोत्सवको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
व्यवस्थापक राजु थापाका अनुसार बार्षिकोत्सवमा आयोजना गरिएको रक्तदानमा ४२ जनाले रगतदान गरेका थिए । रगतदान प्रति सर्वसाधारणमा चेतना दिन तथा बर्षायाममा रगतको अभाव हुन नदिन त्यस्तो खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो ।
रक्तदानमा संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण गौतम, व्यवस्थापक राजु थापा, लेखा संयोजक एकराज प्याकुरेल, सञ्चालकहरु, शेयर सदस्यहरु,कर्मचारीहरु लगायत सर्वसाधारणहरुले समेत रगतदान गरेको सचिव भोजकुमार राईले बताए । रक्तदाताहरुलाई प्रंशसा पत्र समेत वितरण गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दन्त शिविरमा ४ सय ५० जना सेवाग्राहीहरुले दन्त सम्बन्धी स्वास्थ्य उपचार पाएका थिए । दन्त शिविरमा कमल गाउँपालिका–५ का स्मारिका, न्यू लाइफ, स्टार, मुनसन र दमकको मदरल्याण्ड बोर्डिङका विद्यार्थीहरुसहित सर्वसाधारणहरुले सेवा पाएका थिए । दन्त शिविरमा दमकस्थित ओम शान्ति डेन्टलका डा. सिपी गैरेसहितका प्राविधिक टोलीले सहयोग पुर्याँएका थिए ।
त्यस्तै, बार्षिकोत्सवमा महिला सम्बन्धी सम्पन्न भएको निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणमा ९५ जनाले सेवा पाएका संस्थाले जनाएको छ । त्यस स्त्री रोग परिक्षणमा दमकको लाइफलाइन अस्पतालका स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. रामेश्वरप्रसाद शाहले प्राविधिक सहयोग पुर्याँएका थिए ।
संस्थाले बर्षेनी बार्षिकोत्सवमा रक्तदानसहितका विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिआएको छ । संस्थाले आफना शेयर सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउदै आएको सेवा प्रणालीलाई थप सहज बनाउन हालसम्म गौरादह र केर्खामा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।